Gbọ elu si Almaty gaa Samarkand, A Kazakhstan - njikọ Uzbekistan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Gbọ elu si Almaty gaa Samarkand, A Kazakhstan - njikọ Uzbekistan
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • News • Ndi akuko • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ Uzbekistan na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Air Astana na-ahụ mgbake mgbe emechara 2020
Samarkand bụ obodo dị na Uzbekistan mara maka alakụba ya na mausoleums. Ọ dị n'okporo ụzọ Silk, ụzọ azụmahịa oge ochie na-ejikọ China na Mediterenian. Udiri ama ama di iche iche gunyere Registan, obodo di iche-iche nke 3 ornate gbara gburugburu, madrassas kpuchitere nke majolica ruo oge nke iri na ise na nke iri na asaa, na Gur-e-Amir, ili elu nke Timur (Tamerlane), onye guzobere alaeze Timurid.
Air Astana ga-ebido ọrụ kpọmkwem site na Almaty ruo obodo oge ochie nke Samarkand na Uzbekistan na 9th June 2021, na ụgbọ elu na-eji ụgbọ elu Airbus A321 na Wednesde na Sọnde arụ ọrụ.
Na Wednesde, ụgbọ elu ga-apụ na Almaty na 15.40 wee rute Samarkand na 16.15, ebe ụgbọ elu nlọghachi ga-apụ na 17.45 wee rute Almaty na 20.20. Na Sọnde, ụgbọ elu ahụ ga-apụ Almaty na 11.20 wee rute Samarkand na 11.55, ebe ụgbọ elu nlọghachi ga-apụ na 13.25 wee rute Almaty na 16.00. Oge niile mpaghara.
Samarkand ga-abụ njem nke abụọ nke Air Astana na Uzbekistan, na-ebugharị ụgbọ elu na-aga Tashkent, isi obodo mba ahụ kemgbe 2010.
Weghachite ikuku ndị ọzọ gụnyere ụgwọ, bido na US $ 163 na klaasị akụnụba yana site na US $ 518 na klaasị azụmaahịa. Tiketi dị na weebụsaịtị Air Astana yana n'ọfịs ahịa, yana ụlọ ọrụ ndị njem akwadoro. A dụrụ ndị njem ọdụ ka ha mara nke ọma tupu ha abanye na ntinye na njem maka njem n'etiti Kazakhstan na Uzbekistan na www.airastan.com